Diyopost.com :: जावलाखेलमा डाक्टर र प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिबीच फूटबल खेल हुने ! ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता शुरु जावलाखेलमा डाक्टर र प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिबीच फूटबल खेल हुने ! ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता शुरु - Diyopost.com
जावलाखेलमा डाक्टर र प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिबीच फूटबल खेल हुने ! ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता शुरु
काठमाडौं । राजधानीमा अंग प्रत्यारोपण गरेका नागरिकलाई हौसला प्रदान गर्न खेलकुद कार्यक्रम आयोजना भएको छ ।
बुधबारदेखि राजधानीको बालाजु स्थित ‘बालाजु डो–प्रतिष्ठानमा शुरु भएको ‘ ९ औँ नेपाल राष्ट्रिय प्रत्यारोपण खेलकुद प्रतियोगीतामा’ अधिकांश प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरु सहभागी छन् ।
विहिबार प्रतिष्ठानको हलमा ‘ब्याटमिन्टन प्रतियोगिता शुरु भएको छ ।
कार्यक्रम संयोजक अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रशिक्षक ध्रुव विक्रम मल्लका अनुसार विहीबार लगनखेल स्थित नेपाली सेनाको खुलकुद मैदानमा अन्य विधाको खेल प्रतियोगिता हुने छ ।
मल्लका अनुसार अन्य काममा समेत अंग प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरुलाई हौसला प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो । प्रतियोगितामा अधिकांश मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरुले भाग लिएका छन् ।
यो प्रतियोगिता पोखरा धरान, बुटवल लगायत ठूला शहरमा समेत भइसकेको छ ।
बुधबार शुरु भएको ‘ब्याटमिन्टन’ प्रतियोगितामा महिला / पुरुष ४० बर्ष मुनि र ४० बर्ष माथि (भेटान) सिंगल ब्याटमिन्टन’
छुट्टा छुट्टै प्रतिष्पर्धा भइरहेको छ ।
विहीबार फेरी लगनखेल सैनिक मैदानमा सय मिटरदेखि ४ सय मिटरसम्मको दौड प्रतियोगिता र फूटबल खेल हुने छ । फूटबल खेलमा भने डाक्टरको समुह र प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिबीच खेल हुनेछ । मल्लका अनुसार विहीबार नै विजयी खेलाडीलाई पुरस्कार वितरण गरिनेछ ।
‘प्रत्यारोपण गरेका अधिकांश व्यक्ति कुनै कुनै काममा हुन्छन् । तर, उनीहरुलाई भेट गराउने र खेलकुदमा सक्रिय बनाउने यो माध्यम हो,’ उनले भने,‘मैले मृगौला ट्रान्सप्लान गरेको १९ वर्ष भयो । मेरो क्रियाकलाप देखेर उहाँहरु सबै खुसी हुनुहुन्छ । हामीलाई मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरका कार्यकारी अधिकृत डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ र गायीका अनिछोइङ डोल्माले हौसला प्रदान गर्नु भयो ।’
प्रतियोगिताका लागि आरोग्य प्रतिष्ठान र मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले प्रायोजन गरेको हो । गायीका डोल्मा आरोग्य प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष हुन् ।